जेठ २८ – ९० को दशकमा बलिउडमा मनिषा कोइरालाको जताततै वाहवाही थियो । उनलाई उत्कृष्ट नायिकाको रुपमा चिनिन्थ्यो । ‘दिल से’ र ‘बम्बे’ जस्ता फिल्ममा उनको अभिनय निकै रुचाइयो । तर अचानक उनको करियर डग्मगाउन थाल्यो जब एक एक गरी उनको फिल्म फ्लप हुन थाल्यो । उनको स्वास्थ्य पनि बिग्रन थाल्यो । पछि उनलाई क्यान्सर भएको थाहा भयो तर उनले हौसला गुमाइनन् । उनी क्यान्सरसँग मज्जाले लडिन् र लगभग चार वर्षदेखि उनी पूर्ण रुपमा क्यान्सरमुक्त छिन् । अहिले मनिषा ‘डियर माया’ नामक फिल्मबाट कमब्याक गरेकी छिन् । उनी संजय दत्तको जीवनमा बनिरहेको फिल्ममा पनि देखिनेछिन् । क्यान्सरसँगको संघर्ष र जीवनको उतारचडावमाथि एक भारतीय अनलाइनले गरेको कुराकानी
जीवनमा केही पनि निश्चित छैनः
यो जीवनको अनिश्चिता नै हो जसले यसलाई नाजुक तर सुन्दर बनाएको छ । करिब २०–२५ वर्ष पहिले मैले त्यो जीवन बाँचे जसबारे धेरै मानिसले कल्पना मात्र गर्न सक्थे । म सधैं एक चर्चित कलाकार बन्न चाहन्थें र यो खेलको शीर्ष स्थानमा बस्न चाहन्थें । म नेपालकी हुँ तर भारतीय फिल्म इन्डष्ट्रिमा सफल र चर्चित बनें । मैले पाँच भिन्न–भिन्न भाषामा करिब ८० फिल्ममा अभिनय गरें । इमान्दारीपूर्वक भन्नुपर्दा केही क्वालिटी र अन्य क्वान्टिटी । थुप्रै अवार्ड पनि पाएँ । मैले आफ्नो जीवनमा जुन कुराहरु पाउने सपना देखें त्यो भन्दा पनि धेरै मैले पाएँ । मेरो दुबै हात भरिएको थियो । म आफ्नो जीवनमा निकै रमाइरहेको थिएँ तर जिन्दगीले मेरो लागि केही अर्को कुरा प्लान गरेको थियो । चाँडै नै म यस्तो भुमरीमा फसें जहाँबाट बिस्तारै बिस्तारै मेरो जीवन नै गुमिरहेको थियो । सुरुवातमा यो कुरा निकै बिस्तारै भयो जस्तै मैले एक खराब फिल्म हस्ताक्षर गरें जसको खराब प्रतिक्रिया पाइरहेको छु । त्यसपछि अर्को एक खराब फिल्म, त्यसपछि अर्को… । तर मैले यसको केही पर्वाह गरिनँ किनभने त्यतिबेला पनि निकै राम्रा निर्देशकले मलाई आफ्नो फिल्ममा लिन चाहन्थे । यस्तोमा मलाई लाग्थ्यो कि म जतिबेला चाहन्छु त्यतिबेला फिर्ता हुनसक्छु । तर यस्तो हुन सकेन । मैले एक खराब जीवनशैली अपनाएँ, जसका कारण गलत संगतमा फँसे । आत्तिएर म एक खराब सम्बन्धबाट निस्केर अर्कोमा फसिरहेको थिएँ । जीवन व्यर्थ भइरहेको थियो तर म यो कुरा स्विकार गर्न सकिरहेको थिइनँ । मलाई त्यतिबेला झट्का लाग्यो जब मेरो विवाह टुट्यो । तर मेरो जीवनमा त्यो मात्र काफी थिएन । त्यसपछि मैले एक खतरनाक प्रकारको क्यान्सरबाट पीडित भएको जानकारी पाएँ ।
मेरो क्यान्सर चरम बिन्दुमा पुगिसकेको थियो । डाक्टरले उपचारभन्दा पहिले मलाई सधैंको लागि मुटु रोगी, सधैंको लागि सुन्न नसक्नु र सधैंका लागि मृगौलामा समस्या हुनसक्ने कागजमा हस्ताक्षर गराएका थिए । यतिमात्र होइन, मलाई बताइयो कि मेरो हात जिन्दगीभरी काँपिरहनेछ । त्यसपछि म डराएँ । निकै डराएँ । मलाई डर लाग्न थाल्यो कि यो मेरो अन्तिम दिन हुनसक्छ । म ‘डी’ अर्थात् डेथ शब्दको सामना गरिरहेको थिएँ । अकल्पनीय र अगाध मृत्यु । मैले सोच्न सुरु गरें, यदि यो मेरो जीवनको अन्तिम दिन हो भने मैले अहिलेसम्मको जीवनमा के गरें ? के मैले सही तरिकाले जीवनयापन गरें र के मलाई त्यसमा गर्व छ ? त्यसपछि मेरो सोच परिवर्तन हुन थाल्यो ।
थाहा भयो सम्बन्धको महत्वः
त्यसपछि मैले निर्णय लिएँ कि म आफ्नो स्वास्थ्यको पूर्ण रुपमा हेरबिचार गर्नेछु । यसको हेरविचार गर्नेछु । मैले मानिसहरुको महत्व बुझें । त्यसपछि मेरो आफ्नो परिवारसँगको सम्बन्ध राम्रो भयो । एक समय थियो जब मेरो वरिपरि थुप्रै साथीहरु हुने गर्दथे तर आज मसँग मुठ्ठीभर साथीमात्र छन् । राम्रो यो भयो कि जो छन् उनीहरुसँग मेरो गहिरो बन्डिङ छ, धेरै महत्वको सम्बन्ध । मैले बुझें कि धेरैसँग सम्बन्ध बनाउनुभन्दा साँचो सम्बन्ध बनाउनु महत्वपूर्ण छ ।
क्यान्सरसँग लडेर सिकेको कुराः
क्यान्सरसँगको लडाईं पछि मैले जीवनका केही आधारभूत नियमको खोजी गरें । किनभने नियम निकै साधारण छ त्यसकारण हामीले यसलाई नजरअन्दाज गरिरहेका छौं । तर हामीले यस्तो गर्नु हुँदैन । मैले पाएँ कि जीवन एक उपहार हो, जे पनि यो जीवनबाट पाइन्छ, त्यो पनि एक उपहार हो । हामीले यसको हिफाजत गर्न र यसलाई सजाएर राख्नुपर्छ । हामीले यसलाई दुबै हात फैलाएर अंगालो हाल्नुपर्छ । जीवनको यात्रामा हामीले जसलाई भेट्छौं त्यो पनि एक उपहार हो । यो क्रममा मैले आत्मविश्लेषणको महत्व थाहा पाएँ । मैले थाहा पाएँ कि हामीले आफ्नो जीवनको वास्तविकतासँगै बाँच्नु पर्छ । हामीले आफ्नै खोजी गर्नुपर्छ । जिन्दगीले तपाईंलाई चकित बनाउनका लागि बाटो खोजिरहेको हुन्छ तर विकल्प हाम्रो हुन्छ । हामी चाहे त यसको शिकार हुने वा यसलाई आफ्नोभन्दा ठूलो बनाउने वा त्यसमार्फत आफूलाई परिभाषित गर्न सुरु गर्ने वा आफ्नो सफलताको प्लेटफर्म बनाउने । वास्तवमा हरेक समस्याको पछाडि एक पाठ र सन्देश लुकेको हुन्छ । विश्वास गर्नुहोस्, हामी कुनै पनि खराब स्थितीलाई उल्लास र उत्साहको मौका बनाउन सक्छौं र यस्तो गर्ने हिम्मत हामीभित्र हुन्छ नै ।